Ndezvipi zvisingaverengeki kumashure ekudzokera shure kweRenlinko?
Backlinks inoramba ichishanda nyika ye digital, pasinei nedzimwe nyaya uye webmasters kutiudza zvimwe zvinhu pamusoro pavo. Ichokwadi, iyo yekupedzisira injini yekugadzirisa zvidzidzo inoratidza kuti backlink ndeimwe yezvinyanya kukoshesa zvinhu zveGoogle nedzimwe injini dzekutsvaga.
Kana zvasvika pakubatanidza chivakwa, kune nzira dzakawanda dzakaedza-uye-dzechokwadi dziripo. Vamwe vavo vanotevera mazano eGoogle, asi vamwe vanoputsa. Mumazuva edu, mamwe emabatanidzwa ekugadzira maitiro anoita zvishoma kugadzirisa mumazuva edu (f. e. guest posting or comment backlinks). Zvisinei, kuchine zvakawanda zvishoma-zvinozivikanwa kana pasi pevhu nzira yekuwana zvakanakisisa zvakasununguka kumashure.
Muchikamu chino ndichati ndikugoverane newe maitiro akawanda ekugadzira mashizha pasi pevhu, vamwe vavo ndakakwereta kubva kuna Brian Dean Backlinko. Regai tinyatsotarisisa mumwe nomumwe wavo.
Nzira dzekuwana backlinks nekuda kweRedlinko methodology
kuwana hutano hwekunze kubva kune zvekugarisana nevamwe. Maererano nenzira iyi, unofanirwa kugoverana zvakakodzerwa uye kuratidza zvinyorwa zvakagoverwa zvikuru. Mushure meizvozvo, unoda kusvika kune vashandisi avo vakatanga kugovera zvinyorwa izvi uye vanovapa nechigadziro chitsva kana chitsva.
Skyscraper chikwata chekuvaka chikwata
Iyi nzira yekuvaka chikwata cheScyscraper yakavakwa naBrian Dean. Yakamubatsira kuti awedzere mararamiro ake ehupenyu neanopfuura 400%. Maererano nenzira iyi, unofanirwa kuziva mazita ekutsvaga kutsvaga uye kuwana chidimbu chezvinyorwa zvinowanikwa pakati pevashandisi. Mushure maizvozvi, iwe unofanira kunyora zviri nani kune mamwe mazwi ekutsvaga. Iva nechokwadi, shanduro yako itsva yenyaya yacho yakasiyana uye inotsvakurudza-yakabva. Kuti upedze iyi nzira yekuvakwa kwekubatanidza, unofanirwa kukurudzira ichi chigadziriswa chezvakagadzirwa pamusoro pehutano hwemagariro nechinangwa zvimwe zvepamusoro PR mazita ekupedzisira achibatanidza zvakare kwauri.
Uchapupu hunobatanidza nzira yekuvaka
Uchapupu hunobatsira zvikuru pamabhizimisi chero ipi zvayo sezvo inoratidza vatengi kugutsikana nezvezvinhu kana michina kambani inopa. Vashandi vewebhu vanovatsvaga sezvo vachiziva zvikomborero zvavanogona kuunza kune zvinyorwa zvavo zvepaIndaneti. Nenzira yakadai, kusika uchapupu hwako hunoita kuti uwane mikana yakaisvonaka yekuwana iwe uri nyore asi ane simba yekupinda. Vashandisi vanonyanya kukwezva makambani ane zvipo zvehugoni kubva kuvanhu vechokwadi kune mawebsite anowanika spammy kuongorora (sekuraira kwakadaro kupupurirwa kunogona kuonekwa nyore nyore). Izvo zvipupuriro zvechokwadi zvewebsite yako yakawanikwa, yakakwirira iyo inotarisa pane peji yemhinduro. Zvakare, zvinoratidzika kuvimbika kune mamwe mabhizinesi. Ndicho chikonzero ivo vanozobatanidza kune yako nzvimbo yekutora pasina kana kubvunza.
Zvose zvaunoda kuita ndekusarudza chigadzirwa chaunoda kupfuura zvose uye unosangana nemupi wako kuti ape uchapupu hwako kune izvi zvimwe chibereko. Zvizhinji zvemahombekombe makuru ezvitoro ane uchapupu hunokosha hwechinangwa ichi. Ndokusaka zvichange zviri nyore kwauri kuti uise chipupuriro chako kuburikidza newebsite yavo.
Iyi nzira yekuvaka yakabatana yakave yakatangwa naRenlinko mumiriri webhuku Brian Dean Source .